WLXU .93.9 .XNUMX।। एफएम | RADIOLEX
WLXU .93.9 .XNUMX ..XNUMX एफएम SCHEDULE
WLXL 95.7 एफएम SCHEDULE
सामुदायिक घटना क्यालेन्डर
WLXU .93.9 .XNUMX।। एफएम
अब अन एयर
समाचार र ग्रुभहरू
8: 00 हूँ 8: 59 हूँ
एक दिन छनौट गर्नुहोस्
सूर्य सोमबार TUESDAY WEDNESDAY थोरै फ्रिडे SATURDAY
क्लबहरू र डान्सफ्लोरहरू मार्फत संसार भर।
इलेक्ट्रोनिका र ढिलो घण्टा वापसीको लागि वातावरण।
मेडीटेटिभ ध्वनिले तपाईंलाई अहिलेमा ल्याउँदछ र तपाईंलाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ।
दैनिक हेडलाइटहरू साथ साथ धुनहरू साथ तपाईंको दिन जान मद्दत गर्दछ।
परम प्रशंसा पार्टी
तपाईको आत्मालाई जगाउन दुई घण्टाको उच्च उर्जा सुसमाचार संगीत।
एलन वाट्स रेडियो घण्टा
'स्ट्यान्ड अप' दार्शनिकका व्याख्यानहरू। AlanWatts.com मा उनको सम्पूर्ण शरीरको अन्वेषण गर्नुहोस्
हेल्दी टाइम्स लेक्सिंग्टनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य र वर्तमान मुद्दाहरूको प्रमोटनको लागि उत्पादन गरेको हो। केभिन हल द्वारा आयोजित।
फk्क, आत्मा, र ज्याज, साथै आर एन्ड बी, सुसमाचार, र हिप-हपका स्प्रिम्पलिंगहरू। अपफ्रन्ट सोलले अधिक परिचित नामहरूबाट अस्पष्ट कलाकारहरू र ब्याक-क्याटलग प्रस्तावहरू शोकेस गर्दछ। १२० मिनेटको आत्मिक आवाजहरू जुन तपाईं तल झर्नुहुनेछ। PRX र मैनेको WERU समुदाय रेडियोमा हाम्रा साथीहरूबाट। Unsplash मा Zach Vessel द्वारा फोटो
Lyfe को चुम्बन
ब्यक्ति र वर्तमान को संगीत प्रेम गर्ने मानिसहरु को लागी एक कार्यक्रम। सोलफुल मोटाउन मुडहरू र अधिक।
पुरानो स्कूल R&B र हिप-हप।
एक सन्देश र उद्देश्यको साथ सोल संगीत।
इबोनी कोलिन्स तपाईंको दिन ज्याजको स a्ग्रहको साथ धेरै आत्मा ल्याउँछ।
सप्ताहन्त पवन डाउन
साताको अन्त्यका अन्तिम घण्टाहरू फेला पार्नुहोस्, सोमबार फेरी घुमाउनु अघि।
शान्त तूफान एक रेडियो ढाँचा र समकालीन आरएन्डबी विधा हो, एक चिकनी, रोमान्टिक, ज्याज-प्रभावकारी शैलीमा प्रदर्शन गरियो। यसको नाम स्मोकी रोबिन्सनको १ 1975 XNUMX album को एल्बम ए शान्त आँधीमा शीर्षक गीत पछि राखिएको थियो।
जब बारहरू र क्लबहरू आधिकारिक रूपमा बन्द हुन्छन्, तर संगीतकारहरू पूर्वाभ्यास र जाममा फर्कन्छन्। हप्ताको घण्टाको लागि आत्मीय र असुरक्षित ट्यूनहरू।
सहज, सजीलो जाज तपाईंको बिहानको स्विing्गिन प्राप्त गर्नका लागि।
केन्टकी मा KET को टिप्पणी
केईटीको सबैभन्दा लामो चल्दो सार्वजनिक मामिला कार्यक्रम १ 1974 .XNUMX देखि पत्रकारलाई हप्ताको समाचार र समाचार निर्माताहरूमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न भेला गर्दै आएको छ। कार्यक्रम कार्यक्रम हो, बिल ब्रायन्ट।
बहुभाषी सार्वजनिक स्वास्थ्य अपडेट
सरकारको दैनिक सारांश सहित, बहुभाषिक सार्वजनिक स्वास्थ्य अपडेटहरू। एन्डी बेशियरको प्रेस वार्तालापहरू। यो कार्यक्रम कोरोनाभाइरस प्रतिक्रिया फन्डको ब्लुग्रास र ब्लू ग्रास कम्युनिटी फाउन्डेशनको संयुक्त प्रयासको संयुक्त प्रयासको सहयोगको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। यो कार्यक्रम पनि रेक्स चैपम्यान फाउन्डेसन COVID-19 राहत कोष द्वारा एक अंशमा सम्भव भएको छ
रेट्रो हिट १ 1980 XNUMX ० को दशक
१ 1980 s० को दशकमा ट्युब्युलर ट्युनहरू
केन्टकी समान न्याय रेडियो
रेट्रो हिट १ 1990 XNUMX ० को दशक
ओह तस्वीर! यो १ 1990 XNUMX ० को दशकमा सब भन्दा उडान आवाज हो
वास्तविक जीवन केटो शो
रेबेका र ब्रिजेटले तपाईंको शिक्षा, विचार, समाचार, र केटो जीवनशैलीको बारेमा बढाउने कुरा ल्याउँदछ। KETO-SIStas, दुई मित्रहरू भेट्नुहोस् जो केटो जीवनशैली मार्फत आशा र स्वास्थ्य साझा गर्न प्रतिबद्ध छन्। रेबेका हनीफान एक फिटनेस प्रशिक्षक र biohack कोच हैं। ब्रिजेट क्याम्पबेल, एक पूर्व शिक्षक जसले केहि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतिहरु पार गरिसकेका छन्, अब उनी शिक्षणको लागि उनको प्रेमको प्रयोग अरूलाई पनि सहयोगको लागि गर्दछन् जसले आफ्नो स्वास्थ्यसँग संघर्ष गरिरहेका हुन सक्छन्। सँगै, यी साथीहरूले वास्तविक जीवन केटो आन्दोलनको सिर्जना गरेका छन्। तिनीहरू मान्छे, विशेष गरी महिलाहरूलाई उनीहरूको वास्तविक जीवनको लागि उत्तम स्वास्थ्य अभ्यासहरू फेला पार्न मद्दत गर्ने कुरामा उत्साहित छन्। "उत्तम आहार" को प्रलोभनलाई वेवास्ता गर्दै रेबेका र ब्रिजेटले मानिसहरूलाई खाने को त्यस्तो तरिका पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ जुन उनीहरूको वास्तविक जीवनमा फिट हुन्छ तर अझ राम्रो स्वास्थ्यतर्फ लैजान्छ। KETO-SIStas मा सामील हुनुहोस् प्रत्येक हप्ता उनीहरूले साना परिवर्तनहरू अन्वेषण गर्छन् तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यलाई अप्टिमाइज गर्न मद्दत गर्न अधिक समय लिन सक्नुहुन्छ। KETO-SIStas को विशेषता सहित रमाईलो जीवन Keto कार्यक्रमको साथ गम्भिर नतिजाको आनन्द लिनुहोस् र आनन्द लिनुहोस्।
एमी गुडम्यान र जुआन गोन्जालेज द्वारा स्वतन्त्र, सप्ताह दिन ग्लोबल समाचार घन्टा। १,1,400००+ टिभी / रेडियो / इन्टरनेट स्टेशनमा एयरहरू
ईन्टरचेन्ज, साक्षात्कारमा आधारित रेडियो कार्यक्रम र पोडकास्ट ब्लूमिंगटन, इन्डियानाको किक-गधा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन डब्ल्यूएफएचबी द्वारा निर्मित प्रश्नहरूमा जान्छ कि हामी आफैंलाई कसरी बुझ्छौं भनेर आकार दिन्छ।
आधुनिक शैलीको साथ रिच रेट्रो टोनहरू।
बाक्लो र काल्पनिक
मोटो र कल्पित एक शो हो जसले कुरा गर्दछ, उत्सव मनाउँछ, र महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै खुशी र चुनौतीहरूको लागि समर्थन प्रदान गर्दछ। विशेष गरी रंगका महिलाहरू जो 40० बर्ष भन्दा माथिका छन्। हामी बच्चासँग जन्मेपछि डेटि fromदेखि लिएर कम्मर फिर्ता लिनको लागि सबै कुरा गर्छौं र बजेटमा जीवन बिताउँदा जीवनको दैनिक तनाव। जब हामी बूढो हुन्छौं हाम्रो चयापचय धीमा हुन्छ र हामी धेरै जना कम्मरको वरिपरि "बाक्लो" हुन थाल्छौं, र तौल घटाउन गाह्रो हुन्छ। जे होस्, त्यसले तपाईंलाई कल्पित मनलाग्दो तुल्याउँदैन। हामी हाँस्नेछौं, रुनेछौं, बाहिर निस्कनेछौं, र हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्ने सबै चीजहरूको बारेमा सूचित हुनेछौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्दछौं जब हामी मोटो र आश्चर्यजनक हुन्छौं।
त्यो मेरो जाम हो: पुरानो स्कूल ट्यूनहरू
जसका लागि तपाईं स्थिर बस्न सक्नुहुन्न।
योद्धा महिला सर्कल
महिलाहरूले अन्वेषण र घरेलु हिंसाको साथ आफ्ना अनुभवहरू साझेदारी गर्दै।
केन्टकीमा बाहिर र यसका बारे
केविन नान्स प्रोफाइलहरू उल्लेखनीय LGBTQ Kentuckians विशेष प्रोग्रामिंगको अंशको रूपमा JustFundKY बाट अनुदानको माध्यमबाट सम्भव भएको हो।
केन्टकी पप र रक
पप र रक कलाकारहरूको ट्र्याकहरू जो लेक्सिंगटन र ब्लूग्रास क्षेत्रका हुन्।
KET गरेको केन्टकी आज रात
केन्टकी आज रात एक घण्टा लामो, साप्ताहिक सार्वजनिक मामिला छलफल कार्यक्रम सोमबार साँझ लाइभ प्रसारण भयो। केन्टकीवासीहरूको सामना गर्ने मुद्दाहरूको बारेमा छलफल। तपाइँ प्रत्येक केन्टुकियनलाई नयाँ विचारहरू र नयाँ विश्वहरू KET मार्फत अन्वेषण गर्ने अवसर दिनुहुन्छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षा अपडेट
COVID-१ emergency को आपतकालिन स्थितिमा, RADIOLEX आवधिक रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षा अपडेट प्रसारण गर्दछ आपतकालीन प्रबन्धन डिभाजन, फ्याटे काउन्टी स्वास्थ्य विभाग, र लेक्सिंगटन शहर मा समुदाय साझेदारहरूको सहयोगमा।
केन्टकी सिंगर / गीतकार, फोक, अमेरिकाना, र रूट्स
गायक / गीतकार, लोक, अमेरिकाना, र जूट कलाकारहरूको ट्र्याकहरू जो लेक्सिंगटन र ब्लूग्रास क्षेत्रका हुन्।
जूट्स संगीत, ग्यारेज, र अमेरिकाना।
अन्तर्वार्ता र स्थानीय कलाकारहरू, उद्योग पेशेवरहरू, र शहर वरिपरिका अन्य aficionados द्वारा प्रदर्शन स्थानीय संगीत दृश्य मा एक गहन नजर।
अमेरिकी चार्ट्सको शीर्षबाट गीतहरू प्रस्तुत गर्दै।
एक अन्तर्वार्ता कार्यक्रम जसले दैनिक नायकलाई आवाज दिन्छ र केन्टकीमा महिला र अल्पसंख्यकलाई असर गर्ने मुद्दाहरूको बारेमा प्रकाश दिन्छ। एक KET उत्पादन।
सँगै बढ्दो पुरानो
बुढेसकालमा कुराकानी र तपाईंको उत्तम वर्षहरूको लागि उत्तम जीवन बिताउने। [...]
परम प्रशंसा पार्टी: मिडवीक मिक्सडाउन
अल्टिमेटि प्रसेस पार्टीका होस्ट सीजे एकिनन्स हम्प डेको लागि सप्ताहन्त उर्जा ल्याउँछिन्। एक घण्टाको शक्ति तपाईंको आत्मा उठाउन! Unsplash मा हेले रिवेरा द्वारा फोटो
तपाईंको दिनको किनारहरूलाई सजिलो पार्नको लागि चिल्लो जाजको मीठो स्वाद।
शब्द संग एक तरीका
शब्दहरूको साथ वे एक उत्साहजनक र जीवन्त घण्टा लामो सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम हो र इतिहास, संस्कृति, र परिवार मार्फत जाँच गरिएको भाषाको बारेमा पोडकास्ट। प्रत्येक हप्ता, लेखक / पत्रकार मार्था बार्नेट र कोशकार / भाषाविद् ग्रान्ट ब्यारेटले कलरहरू, पुरानो भनाइहरू, नयाँ शब्दहरू, व्याकरण, शब्द मूल, क्षेत्रीय बोली, पारिवारिक अभिव्यक्ति, र राम्रोसँग बोल्ने र लेख्ने बारेमा कल गर्नेहरूसँग कुरा गर्छन्। तिनीहरू विवादहरू सुल्झाउँछन्, शब्द क्विजहरू खेल्छन्, र भाषा समाचार र विवादहरूको बारेमा छलफल गर्छन्। सन् १ 1998 XNUMX since देखि प्रसारण गरिएको यस कार्यक्रमलाई साढे पचास लाख भन्दा बढी श्रोताहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वभरि पोडकास्ट मार्फत सुनेका छन्। शो वेवर्ड इन्क। द्वारा उत्पादन गरिएको छ, कुनै पनि स्टेशन वा नेटवर्कसँग असम्बद्ध एउटा सानो स्वतन्त्र गैर-नाफामुखी संस्था। Unsplash मा नूह ब्ल्याक द्वारा फोटो
साप्ताहिक अन्तर्वार्ता र लेक्सिंगटनको कलात्मक समुदायबाट मुभर र शेकरहरूसँग कुराकानी।
Laverne लेखन कार्यशाला
हाम्रो लेखकको कार्यशालाले लेखकहरूलाई उनीहरूको कामको सशक्त छलफलमा प्रगति गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्दछ। मलाई सन्देश पठाउनुहोस् यदि तपाईं लेखक वा प्रतिक्रियाकर्ताको रूपमा सहभागी हुने बारेमा बढी जानकारी चाहानुहुन्छ।
एसिड ज्याज यात्रा
एसिड ज्याज, जसलाई क्लब ज्याज पनि भनिन्छ, एक संगीत विधा हो जुन जाज, आत्मा, फk्क, र डिस्कोको तत्वहरूलाई मिलाउँछ। एसिड ज्याजको उत्पत्ति १ 1980 .० को दशकको मध्य लन्डन क्लब दृश्यबाट भयो र यो दुर्लभ ग्रूभ आन्दोलनमा अमेरिका, जापान, पूर्वी यूरोप र ब्राजिलमा फैलियो।
केहि उत्साहितका साथ आफ्नो दिन सुरू गर्नुहोस्, राम्रो ट्युनहरू तपाईं अघि बढ्नको लागि।
पछिल्लो years०० बर्षबाट शास्त्रीय संगीतको एक एक्लेक्टिक वर्गीकरण।
दुनिया भरबाट शास्त्रीय संगीत।
दुई घण्टा प्रयोगात्मक, नि: शुल्क, र आधुनिक ज्याज, साथै विश्व र शास्त्रीय डान गोडबे संग।
बूगी तल पसीना क्लासिक डिस्को हिट गर्न।
कफ बन्द छ
एउटा रमाईलो, हाई-उर्जा कार्यक्रम एडम बैंकहरू द्वारा होस्ट गरिएको। आडमले विश्व घटना, खेल र पप संस्कृतिबाट हालका घटनाहरू लिन्छ। आदम र उसका साथीहरूबाट आवधिक पाहुनाहरू र श्रोताहरूको कल-इनबाट अनियमित ट्यान्जेन्टहरूको लागि ट्युन इन गर्नुहोस्
कुराकानीहरू - टेबल वरिपरि
हाम्रो समुदाय र हामी बारे मा कुराकानी।
J ट्रेन लिनुहोस्
चेस्टर ग्रन्डी द्वारा आयोजित, जाज प्रोग्रामिंग समकालीन र ऐतिहासिक संगीत प्रस्तुत गर्दै; जाज कमेन्टरी, साक्षात्कार, रेडियो कागजात, आदि समावेश हुनेछ; कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकी ज्ञान र जाज संगीतको सांस्कृतिक / ऐतिहासिक महत्त्वको लागि सार्वजनिक ज्ञान र प्रशंसालाई अमेरिकी संस्कृति र पहिचानमा बृद्धि गर्नु हो।
नयाँ वर्षको पूर्व विशेष
वर्षको संगीतको चार घण्टा पूर्वव्यापी उत्तम एल्बमहरू र २०ians० को बीचमा मरेका संगीतकारहरूलाई आदर देखाऊ।
समाचार र ग्रुभ्स - सप्ताहन्त संस्करण
हप्तामा त्यो पछाडि फर्केर हेर्नुहोस्।
"था किद" कीथ कारनेटले आफ्ना श्रोताहरूलाई पुरानो-स्कूल आर एन्ड बी, हिप-हप र धेरै प्रिन्सको साथ संगीत ईतिहास दिन्छ।
सर्वश्रेष्ठ भाग: हिप-हप १०१
जोए ट्रुएक्स सबै क्लासिक र नयाँ हिप-हपको साथ जान्छ, स्थानीय र प्रमुख रेकर्डि artists कलाकारहरू, इन्स्ट्रुमेन्टल मिक्सहरू, ब्रेकबिट्स, र अन्य धेरैको साथ प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता!
Old० को Party ० र अबको लागि क्लासिक हिप हप संगीत प्रस्तुत गर्ने ओल्ड स्कूल ब्लक पार्टी।
हिप-हप कलाकारहरूबाट ट्र्याकहरू जो लेक्सिंगटन र ब्लूग्रास क्षेत्रका हुन्।
कटमास्टर अल्फा मिश्रण र गोल्डन युग हिप हप, अनियमित र्‍याप, र तीन टेकनीक १२०० टर्नटेबलमा ब्रेकबीट रेकर्ड काट्दै!
माइन्डफुलनेस बढाउनको लागि एम्बियन्ट साउन्डस्केपहरू।
अफ्रिकी संगीत र अफ्रीकी राष्ट्रहरूको इतिहास र संस्कृति बहु भाषाहरूमा: फ्रेन्च, अंग्रेजी, बुरुंडी, स्वाहिली, र किन्यारवाण्डा।
एक ताजा, आविष्कारपूर्ण ग्लोबल ध्वनिको शैली र शैलीहरूको स्वागतपूर्ण प्रस्तुतीकरणको साथ, यस पुरस्कार-विजेता शोले संगीतको खोज र स्मार्ट मनोरन्जनको विविधतालाई बोल्दछ जसमा विविधता र आकर्षक विश्व संगीतले एक व्यापक श्रोताको लागि अपील गर्दछ। PRX बाट पुरस्कार विजेता रेडियो RADIOLEX द्वारा तपाइँको लागी ल्याएको।
ग्लोब ट्रोटर: वर्ल्ड बीट्स
हरेक महाद्वीप बाट अन्तर्राष्ट्रिय हिट।
रिमिक्सिंग, रिचार्जिंग, र सर्वश्रेष्ठ आर एन्ड बी र नृत्य ट्र्याकहरू s०, s०, र s ० को दशकबाट। जेफ विलियम्ससँग।
WLXL 95.7 एफएम